Igbo, Tracts, UZI NKE 05 -- Kwadebe Ụzọ nke Jehova! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 05 (Prepare The Way of the LORD!)
UZI NKE 5 - Kwadebe Ụzọ nke Jehova! (Aịsaịa 40:3)
Ndị mmadụ na-agba ọsọ n'enweghị ihe mgbaru ọsọ na ndụ, na-anwa inweta obi ụtọ ma na-enweta nri ha kwa ụbọchị, n'echeghị ọnwụ nke na-echere ha. Enwere mmadu ole na ole ndi na-eche banyere Chineke, tue egwu ya ma mee ike ha nile idebe ukpuru ya ka ha wee nweta nduzi na eziokwu.
Onye Okike nke eluigwe na ala echefughị ihe ndị O kere eke. Ọ hụrụ ha n'anya, na-eche banyere ha, na-agwa ha okwu ma na-enyocha obi ha. Ochoro inye ha ike nke Chineke site n'òkè Ya, maobr na ha chègharia wee chighar ikwute ya.
Ọ bụ Jehova na-abịakwute anyị
Mgbe Adam na Iv nupụrụ isi n'ebe Chineke nọ, ihere na-eme ha ma zoo ya, ebe ha ghọtara ihe ọjọọ ha mere. Ma Onyenwe anyi amaghi ha ikpe, ma ha biara nacho ha ka ha si, "olee ebe gi onwe gi, Adam?" (Jenesis 3:9). Onye Okike na-ele onye obula anya ma jua ya, "ebee ka i di? Ebee ka ị rutere ná ndụ gị?"
Onyenwe anyi kporo Ebreham na Mesopotemia, site n'etiti ndi chichi nke omume ya nke mebiri emebi, wee mee ya onye njem nke naenweghi ntorich ebe obibi ebighiebi diocha. Onwe gị kwa, onye na-agụ akwụkwọ, na-achọ ụzọ nke ezi omume, na-achọ ebe obibi ebighi ebi maka onwe gị?
Jekọb bụ onye maara ihe. Ọ gbagara n'ala dị anya wee lụọ di n'ebe ahụ. Mgbe ogologo oge gachara n'ala ala ọzọ, ọ laghachiri n'ala nna ya. Ma mmụọ ozi Jehova guzoro n'ụzọ iji taa ya ahụhụ n'ihi njehie ya gara aga. Ma Jekob kweere na ebere dị ukwuu nke Jehova. Ọ gbara Onye Nsọ ahụ ume, sị, "Agaghị m ahapụ gị ma ọ bụrụ na Ịgọzieghịm" (Jenesis 32:26). Ịna-arapara Chineke n'ahụ rue mgbe Ọ ga-azọpụta gị?
Mozis si n'Ijipt gbaga n'ọzara n'ihi na, n'iwe ya, o gburu onye nche nke na-eti ohu Hibru. Mgbe afọ iri anọ gasịrị, Onyenwe anyị pụtara n'ihu ya n'osisi na-ere ọkụ, ma kwusaara ya na "Abụ m onye m bụ," Onye na-agbanwe agbanwe. Ọ ga-ekwesị ntụkwasị obi ruo mgbe ebighị ebi. Jehova ọ chọtara gị n'ọzara nke ndụ gị? Obi gị ọ na-anụ òkù Ọ na-akpọkarị gị? Ìchere na ikwesị ntụkwasị obi nke Onye ahụ na-adịghị agbanwe agbanwe?
Samuel bu nwa okoro mgbe Jehova kpotoro ya ma họputa ya ibu onye ikpe nke mba ya. Chineke anaghị ahọrọ ndị okenye, ma ndị na-eto eto. Anyị kwesịrị ịkụziri ụmụaka na gburugburu anyị okwu nke Chineke n'asụsụ nke ha ma duzie ha na Ya. Jehova chọrọ ịbịakwute ndị na-eto eto taa, na-eji ndị ohu dị ka gị.
Devid kwara iko, nyezie iwu ka o gbuo di di ya. Ma Jehova ekweghi ka ọ je. O zigara ya onye amụma ka o kpugheere ya mpụ ya na ịkpọsa iwe Chineke n'isi ya. Devid ji ezi obi chegharịa ma malite iduzi ndị mmehie ka ha si n'aka mmehie chigharịkwuru Onyenwe ha. Devid chọtara amara na mgbaghara n'ime Jehova. Gụọ Abụ Ọma nke 51; kpuru ya ma kpee ekpere ya n'amaokwu na okwukwe ga-enweta nkasi obi na mgbaghara dị ka Devid mere.
Aisaia, onye-nchu-àjà, hêrê ebube nke Onyenwe anyé, wee tie nkpu, "Ahuhu dim, n'ihi na adighm! N'ihi na abụ m onye na-adịghị ọcha egbugbere ọnụ, m na-ebi n'etiti ndị na-adịghị ọcha egbugbere ọnụ; n'ihi na anyam ahụ Eze, Jehova nke ụsụụ ndị agha". (Aịsaịa 6:5).
O tiri mkpu n'ihi na ìhè nke Jehova kpughere ya ọnọdụ ya na ọnọdụ nke ndị gbara ya gburugburu. Ị na - achọsi ike ịbịaru Chineke nso iji hụ ebube Ya? Mgbe ahụ, ịga-aghọta na mmehie gị na-ekewapụ gị site na Onye Nsọ. Ịmaara na mmehie gị mere ka ịghara ịbịaru Onye Okike dị nso nso ma ewepụ ha? "Anyị na-arịọ unu ka unu na Chineke dị ná mma" (2 Ndị Kọrịnt 5:20).
Kwadebe ụzọ nke Onyenwe anyị!
Onye choro imeju Chineke kwesiri idebe ihe nile O nyere n'iwu. Onye n'emehieghi ma mebie iwu Ya, kwupụta mmehie ya ma rịọ mgbaghara nke Jehova dịka nkwa Ya si dị, "Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, O kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye kwesiri ịgbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụ anyị ajọ omume nile" (1 John 1:9). Onye na-agha ụgha, ya gakwuru Jehova wee kwupụta na ọ ghaworo ụgha. Onye ọ bula nke nāchọta ihe n'ulo-ya nke nābughi nke ya, ya were ya nye onye-nwe-ya, riọ ya ọbọ. Onye na-eme ihe na-adịghị ọcha nye onye ọzọ, ya kwupụta mmehie ya nye Chineke, chegharịa ma ghara imehie ọzọ. Onye na-emekpa onye ọzọ, gụnyere nne na nna ya, nwunye ma ọ bụ ụmụ ya, ka ọ rịọ mgbaghara ha ma nyere ha aka.
Jọn Onye Na-eme Baptizim mezuru nkwa dị ukwuu nke onye amụma Aịsaịa dị ka ọ na-emeghachi ihe ngosi ọ natara, "olu nke onye na-eti mkpu n'ọzara: 'Kwadebenụ ụzọ nke Onyenwe anyị; me ka okporo-uzọ-gi nile di nma n'uzọ ọzara. Agēme ka ndagwurugwu nile di elu, ugwu nile na ugwu ntà ọ bula ewe di ala; agēme ka ebe b͕agọrọ ab͕agọ guzosie ike, ebe ewusiri ike gātọ kwa ogho; agēme ka ebube Jehova puta ìhè, anu-aru nile madu g'hu kwa ya n'otù" (Aisaia 40:3-5; Luk 3:4-6).
Jọn Onye Na-eme Baptizim kwusara na ọ dịghị onye ọ bụla bụ onye ezi omume. Anyị niile bụ ndị ikpe mara, a ghaghịkwa ime ka anyị dị ọcha ma gbanwee ka anyị bụrụ ndị dị umeala n'obi. Onye na-ata ahụhụ ma na-akwa ákwá n'ihi ịda mbà n'obi kwesịrị ịgba ume ma gbakee. Onye na-aghọgbu ndị ọzọ, ka ọ zere ụzọ aghụghọ ya, na-eje ije n'ụzọ ziri ezi, ma kwụghachi ndị ọ meworo ihe ọjọọ.
Amaokwu ndị a na-achikota iwu Jehova: "Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Onyenwe anyị n'anya" (Deuterọnọmi 6:5), na, "Ị ghaghị ịhụ onye agbata obi gị n'anya dịka gi onwe gi" (Levitikọs 19:18). Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ Chineke n'anya, debe iwu Ya. Rịọ Jehova ka o gosi gị otu esi akwadebe ụzọ Ya ka O nwere ike ịbịakwute gị n'onwe gị.
Jehova na-akwadebere gị ụzọ
A muru Nwa nke Meri n'uzo di ebube, n'ihi na Mo Chineke malitere ibu madu nime Ya. E zigara Kraịst n'anụ ahụ n'ime ụmụ mmadụ na-emehie emehie. O gosipụtara ịhụnanya Ya maka ha site n'ịgwọ ndị ọrịa niile bịakwutere Ya, sitekwa n'ikike ime mmụọ, Ọ napụtara onye nwere mmụọ ọjọọ ya. Ma ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke mba Ya amaghị na isi nke ebube Ya bụ ịhụnanya dị ọcha Ya.
Onyenwe anyi obi ebere naemeghe obi Ya nye ndi niile náegbali ikwado uzo maka ibia Ya biakwute ha. Nke a mere Ọkpara nke Mary ji wepụ mmehie nke ụwa, kpuchie anyị, mee ka anyị dị ọcha pụọ na mmehie niile, ma mee ka anyị kwenye n'efu. Anyị kwesịrị ikele Ya ma hụ Ya n'anya n'ihi na O megheere anyị ọnụ ụzọ eluigwe.
Ọbịbịa nke Kraist gaa ụwa anyị bụ ebe nzuzo nke akụkọ ihe mere eme mmadụ gbanwee. Chineke batara n'ụwa anyị na ụwa ga-enwe ike ichigharịkwuru Ya. Chineke na-agbaghara onye ọ bụla nke chegharịrịnụ ma chigharịkwute Ya. Onye nāghọta ihe-nzuzo a bu ihe-ọmuma;
Chineke na-abịakwute gị n'onwe gị
Kraist bilitere n'ili n'ihi na O meriri onwu, O rigoro n'eluigwe, ya na Chineke di ndu. O choro ndi Ya náeso zoya ndiohr n'anya. Ọ maara adịghị ike ha na olileanya ha. Nka bu ihe mere O ji zite mo nso Ya. Tupu Kraist arịgo n'eluigwe, Kraist kwuru, sị, "Ana m agwa unu eziokwu, ọ bụ uru unu ka m wee pụọ; n'ihi na ọ bụrụ na anaghị m apụ, Onye nkasi obi agaghị abịakwute gị; ma oburu na m aga, m'gazitere ya ya" (Jon 16:7). Chineke na-abịakwute anyị site na Mmụọ Nsọ, Onye Nkasi anyị, nke bi n'ime ụmụazụ Kraịst.
I meghewo obi gi nye mo nke Kraist? O choro igbanwe gi wee mejue gi n'anya ya ka udo ya, obi uto, ntachi obi na obi oma gebi n'ime gi (Matiu 11:29, Ndi Galetia 5:22-23). Jehova na-akụ aka n'ọnụ ụzọ nke obi gị. Ị ga-emeghe obi gị nye Ya? Emela ka obi-gi sie ike n'iru Ya, kama dozie uzọ Jehova.
"Bilie, gbaa; n'ihi na ìhè gị abịawo! Ebube Jehova adakwasịwokwa gị. N'ihi na lee, ọchịchịrị ga-ekpuchi ụwa, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị; ma Jehova ga-ebili n'elu gị, a ga-ahụkwa ebube ya n'ahụ gị." (Aịsaịa 60:1-2)
Chineke na-abịa kwute onye ọ bụla
Ịhụnanya Kraịst na-eduzi ndị niile e mere ka ha dị ọhụrụ n'ụzọ ime mmụọ iji wetara ndị enyi ha na ndị agbata obi ha ozi ọma nke ozioma ahụ ma gwa ha na Chineke dị njikere ịbịakwutekwa ha. Agbanwela onwe gi, ma soro Kraist ma choo ndi ohie.
Ọ bụrụ na ị maghị otú ịga-esi jeere Onyenwe anyị ozi, kpee ekpere ma rịọ maka nduzi na nduzi Ya, Ọ ga-ezikwa gị ụzọ ị ga-esi ruo ndị ọzọ, rụọ ọrụ ọma, nyekwa ndị nọ ná mkpa ebere. Onyenwe anyi ga emeghe onu gi ka i wee gwa ndi choro ka ha nuru banyere ihu Chineke na idi nso. Onyenwe anyị na-ewusi gị ike, na-aga gị ma na-echebe gị. Nyefee ugbua nke ndụ gị nye Kraịst, mgbe ahụ ị ga-ejupụta na ngọzi. Onyenwe anyị ga-ahazi kọntaktị ime mmụọ gị.
Na-atụgharị uche n'ihe omimi banyere ọbịbịa Kraịst
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọbịbịa Jehova na ndị ikom na ndị inyom n'oge gara aga, ugbu a ma n'ọdịnihu, biko degara anyị akwụkwọ, anyị ga-ezitere gị Oziọma nke Kraịst na ntụgharị uche na ekpere, ka e wee mee ka okwukwe gị sikwuo ike, ịhụnanya na olileanya.
Anyị na-echere akwụkwọ ozi gị. Ọ bụrụ na ị deere anyị akwụkwọ, echefula ịdebanye adreesị zuru ezu gị ka akwụkwọ ozi anyị wee bịakwute gị.
Page last modified on October 01, 2018, at 02:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)